अध्यात्मको बाटोमा १९ -बिचार शक्ती के हो ? – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
Jun 8, 2020 Spiritual
अध्यात्मको बाटोमा१९ – बिचार शक्ति के हो ?
बिचार शक्तिको बारेमा बुझ्नको लागी पहिले त हामीले बिचार के हो ? कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ ? मान्छेलाई बिचारले के प्रभाव पार्दछ ? बिचार कति शाक्तिशाली छ ? बिचारको स्वरुप र आकार के हो ? रंग के हो ? बिचार कसरि बदल्न सकिन्छ ? बिचारले मनमा स्थान बनाउदा के फाइदा बेफाइदा हुन्छ ? यो बस्तु हो कि ? बिचार देख्न सकिन्छ कि सकिदैनन ? मान्छेको मनमा किन बिचारहरु आइरहन्छ ? यी तमाम प्रश्न हाम्रा अगाडी आउनु स्वभाविक हो ।
हामीहरुले प्रायस आफ्ना आखाँले देखेपछि देखिएका बस्तुहरुको बारेमा उसको रंग, आकार, स्थान आदि इत्यादि हाम्रा मनमा आउदछन र त्यसको बारेमा सोच्दछौ । तर थुपै यस्ता बिषयबस्तु छन नदेखे पनी मात्रै अनुभव र अनुमानले पनि सोच्न र बिचार गरिराखेका हुन्छौ । जुन चर्म चक्षु नदेखेका र हामि भित्र भएको दिब्य चक्षुबाट देखिने बस्तुको बारेमा बिचार उत्पन्न हुने गर्दछन ।
बिचार भनेको कुनै पनी बिषय वा बस्तुको बारेमा सोच्नु र त्यसै अनुरुपको राय बनाउनुलाइ बिचार भन्दछन । सबै भन्दा मजबुत र उपयोगी शक्तिशाली शक्ति नै मन हो । बिचारलाई उत्पन्न गर्ने मनको संकल्प नै हो । मनको संकल्पबाट नै बिचारको प्रादुर्भाव भएको हो । हाम्रो यो मनको शक्तिले मस्तिष्कमा बिचार उत्त्पति गराउदछ । यहि बिचारले तपाइँ हाम्रो जीवनमा घटित हुने परिघटनाको लागी जीम्मेदार हुन्छ ।
तपाइँ हाम्रो मश्तिष्कमा उत्त्पन्न हुने प्रमुख बिचारले तपाइँ हाम्रो व्यबहार र दृष्टिकोणलाइ प्रभावित पार्दछ र हाम्रा काम क्रिया प्रतिक्रियालाइ नियन्त्रण गर्दछ । मानिसको मनले एक दिनमा पचासौ हजार बिचार सोच्न भ्याउछन र यी बिचारहरु आउने जाने भैरहन्छ, मान्छेको दिमागमा । हाम्रो मतिश्कमा ८६ बिलियन न्युरोन हुन्छन । १०० ट्रिलियन synapse स्टेसन हुन्छन र एक न्युरोन बाट अर्को न्युरोनमा जान यसको आज्ञा चाहिन्छ । सरिरबाट प्राप्त हुने ग्लुकोन इलेक्ट्रिक पावरले जेनेरेटर गरेर केमिकलमा परिणत गरि अर्को न्युरोनमा पुर्याउछ । यसरी हाम्रा मश्तिश्ममा आएका आइडिया, सोचलाई बिकसित गरि बिचारमा परिणत गरिदिन्छ । हाम्रो मश्तिष्कमा आउने बिभिन्न किसीमका अक्षर शब्द ,नम्बरबाट बन्ने कुराको डाटालाइ बिचार भन्न मिल्दैन । डाटा त खाली हामीलाई जानकारी प्राप्त गराउने टुल मात्रै हो । बिचार भनेको भिन्दै कुरा हो । बिचार भनेको सृजनात्मक कुरा हो । जसले नयाँ कुराको आविष्कार गर्दछ । हजारौ बिचार हाम्रो मष्तिष्कमा कुदिरहेका हुन्छन । कहिले काही ति हजार बिचार मध्ये एक बिचार यस्तो हुन् सक्छ जसले तपाइँ हाम्रो जिन्दगीलाइ परिबर्तन गरिदिन सक्छ ।
हाम्रो मश्तिश्कले हाम्रो सरिरको प्रत्येक कोषमा रक्त संचार, हाम्रा इन्द्रियाहरुलाई, सरिरको तापक्रम, स्वास प्रस्वास आदि इत्यादि स्वचालित रुपमा कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ र सहि नाप तौल, समय मिलाएर गरिएको हुन्छ । सवै कुरालाई हाम्रो मश्तिश्कले स्वचालित रुपमा सेट गरेको हुन्छ । त्यसभन्दा बाहिरबाट आयातित इन्फर्मेसन, सोच बिचार प्रत्येक सेकेन्डमा आउने जाने भैरहेका हुन्छन । हाम्रो मश्तिश्कमा संधै आइरहने हजारौ बिचारहरु आउने जाने गरिरहेका हुन्छन ।
बैज्ञानिकहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् कि संसारमा सबभन्दा शक्तिशाली सुक्ष्म बस्तु अर्थात अणु परमाणु नै हुन् भनेर । जड बस्तु भन्दा चेतन र सुक्ष्म बस्तुहरु शक्तिशाली हुन्छन । ढुंगा भन्दा माटो शक्तिशाली हुन्छ । माटो भन्दा पानी अरु सुक्ष्म छ वा तरल छ र माटो भन्दा बलवान छ । पानि भन्दा वाफ अझ सुक्ष्म छ यानी बायु पानी भन्दा पनी बलवान छ । शब्द भन्दा प्रकाश सुक्ष्म छ शब्द भन्दा प्रकाश बलशाली छ । प्रकाश भन्दा बिजुली शुक्ष्म छ र प्रकाश भन्दा बलशाली छ । अणू परमाणु हरु अन्त्यन्त शुक्ष्म बस्तु हुन त्यो भन्दा पनी न्युट्रोन प्रोटोन अझ सुक्ष्म छन । यी सबै भन्दा बिचार अझ सुक्ष्म छ । त्यसैले बिचार शक्ति संसारमा सबभन्दा सुक्ष्म छ र अन्त्यन्त शक्तिशाली छ र हुन्छ भन्न सकिन्छ ।
“जहाँ न पहुंचे रवि, वहाँ पहुंचे कवि” ।
यो हिन्दीमा कविलाई भनिएको भनाइ असाध्यै प्रचलित छ । जहाँ सुर्यको प्रकाश पुग्न सक्दैन त्यहा कवि पुग्न सक्छन”” भनेको नै कविको बिचार पुग्ने भनेको हो । बिचार शक्ति असाध्यै बेगवान छ जो प्रकाश भन्दा पनी छिटो गतिमा बिचरण गर्न सक्दछ ।
यो संसारमा जे जति आविष्कार र नयाँ काम र बिषयबस्तुको सृजना भएको छ, त्यसको स्वरुप मानिसको अदृश्य मनबाट उत्त्पत्ति भएको बिचारबाट हो । बिचारशक्तिमा यस्तो भयानक शक्तिशाली हुन्छ । मानिसभित्र भएको भित्रि आत्मिक संसारबाट दृढ बिश्वास साथ उत्पन्न अदृश्य बिचारले सोचे जस्तै भौतिक संसारमा त्यसको परिणाम पाउन सक्दछ । जसले जीवनको सकारात्मक सपनालाइ सजिलै हासिल गराउन सक्दछ र जिवन्त बनाउदछ । त्यहि बिचारशक्ति नकारात्मकतिर ढल्कियो भने सबभन्दा डरलाग्दो र मृत्युमय बनाइदिन सक्छ ।
यहाँ बिचारका तथ्यहरुलाई बूदाँगत रुपमा व्याख्या गर्ने कोशिश गरेको छु ।
१. हाम्रो बाहिरी आवरण बोलीचाली देखि लिएर ब्यबहार सम्मका कुरालाइ भित्र उब्जिने बिचारले प्रभावित गर्दछ ।
२. हाम्रो बिचार शक्ति असिमित छ । हामी प्रत्येकमा इन्टेलीजेन्ट चेतना छ । किनकि हामी सबै यस ब्रह्माण्डको एक हिस्सा हौ ।
३. हाम्रा बिचारहरु सदैब जीवित हुन्छन । यदि मन स्थिर उर्जा हो भने बिचार गतिशील उर्जा हो । यदि हाम्रो मनको उर्जा बिचार व्दारा गतिशील भएर एक किसिमको कम्पन युक्त भएर व्यक्त हुन् पुग्दछ । यस्तो बिचारशक्ति सदा जीवित हुन्छ ।
४. हामी भित्र उत्पन्न हुने बिचार शक्ति चाहे सकारात्मक होस् या नकारात्मक होस ति बिचारहरु आफ्नो अनुकुलका बिचारसंग आकर्षित हुन पुग्दछन । यसैलाई आकर्षणको नियम ( law of attraction) भन्दछन ।
५. सफल, सुखी खुशी स्वास्थ्य जिबन जिउन बिभिन्न बाधा आउनुको कारण हो, हामी भित्र उत्पन्न सकारात्कम र नकारात्मक बिचारको व्दन्द हुनाले हाम्रो सकारात्मक बिचार कमजोर हुन् पुग्दछ र मानिसले आफुले आफैलाई दुखि बनाउन पुग्दछ ।
६. बिचारशक्तिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो जिन्दगी परिबर्तन गर्न सकिन्छ । यदी तपाइँ हामीले हामी भित्र भएको अबचेतन मनमा आफुले चाहेको बिश्वास गरेको विचार र भावनालाई प्रवेश गराउन सक्यौ भने जादुमय परिबर्तन हुन् सक्छ ।
७. अनाबस्याक र नकारात्मक बिचारलाई मनबाट हटाउन र बिचार परिबर्तन गर्न आबस्याक छ ।
८. बिचार शक्तिलाई मजबूत बनाएर well power इच्छा शक्ति बलियो भयो भने स्वास्थ्य निरोगी रहन सकिन्छ । इच्छा शक्ति भएन भने सानो तिनो रोग पनी ठिक हुन् सक्दैन ।
९. हामीले जस्तो बिचार गर्दछौ, त्यस्तै अदनुसार फलको भागिदार पनी बन्दछौ ।
तसर्थ तपाइँ हामीले जहिले पनी अरुको कल्याण गर्ने बिचार, जहिले पनी अरुको भलाइ हुने बिचार, देश समाजको उन्नति बिकाश गर्ने बिचार, जहिले पनी सकारात्मक बिचारलाइ आफ्नो मनमा खेल्न दिनु पर्दछ । जसले गर्दा तपाइँ हाम्रो र समाजको उन्नति प्रगती हुने छ ।